चेल्याबिन्स्क हकी स्कूल दुनिया अब सबैभन्दा प्रतिष्ठित च्याम्पियनशिप मा खेलिरहेका छन् जो प्रतिभाशाली युवा खेलाडीहरूलाई धेरै दिनुभयो। एक प्रमुख उदाहरण यूजीन Kuznetsov छ। एक उज्ज्वल र फलदायी खेल यो जवान खेलाडी धन्यवाद राष्ट्रिय हक्की लिग रूपमा सेवा गर्दैछन् र राष्ट्रिय टीम को बाँध्न मा नियमित भनिन्छ। Sergey Shumakov - उहाँको पाइला अर्को जवान र भेंट हकी खेलाडी चेल्याबिन्स्क आउँछ।
खेल मा पहिलो कदम
Sergey Shumakov 1992 मा चेल्याबिन्स्क शहर मा जन्म भएको थियो। यस शहर मा हकी धेरै लोकप्रिय छ। सर्गेई यो खेल किन रोजे सायद यो छ। समयमा आफ्नो हजुरबुबा "Yunost" स्टेडियम को एक कर्मचारी थियो। उहाँले यसलाई प्ले कहिल्यै पनि, बरफ मा जवान केटा ल्याए जसले थियो। सर्गेई बाल्यकाल एक स्ट्राइकर रूपमा खेल्छ। उहाँले टोलीमा स्कोरर को सूची मा सधैं थियो। Sergey Shumakov सम्पर्कमा शक्ति र उत्कृष्ट फालिएको, एक उच्च गति छ। आफ्ना सबै बाल्यकाल उहाँले वर्तमान NHL तारा Evgeniem Kuznetsovym संग प्ले। यो बन्डल हडताल गर्ने विरोध टोलीमा डर। यो जवान तारा कोच याद र चाँडै युवा हक्की लिग प्ले एक टोली आकर्षित गर्न थाले।
को MHL प्ले
को युवा हक्की लिग रूपमा सेवा गर्दैछन् जो टीम, "पोलर बियर", को लागि सर्गेई एकदम प्रारम्भिक debut। 2009 मा, त्यो उसलाई एक पेशेवर सम्झौता मा प्रवेश। आफ्नो पहिलो वर्ष पहिले नै, त्यो 58 मिलान बिताए। त्यसपछि हकी विकास को एक नयाँ स्तरमा सर्गेई Shumakov संक्रमण। लक्ष्य एक ठूलो संख्या उहाँले त स्कोर असफल भएको थियो।
आफ्नो debut सिजन, यी जवान हकी खेलाडी 8 अंक गोल गरेका थिए। चार लक्ष्य उहाँले रन र सहायता को नै नम्बर दिए। आधारित Shumakova शब्दहरू, खराब प्रदर्शन पनि कोचिंग कर्मचारी संग लगातार संघर्ष गर्न सम्बन्धित हुन सक्छ। ती किनभने, Sergey टोलीमा छोड्न बाध्य भएको थियो। आफ्नो पैतृक चेल्याबिन्स्क अर्को फेला पार्न सकेन। समयमा एजेन्ट थियो। को युवा हक्की लिग सर्गेई मा आफ्नो दोस्रो सिजन को ओरेनबर्ग टोली "सेतो टाइगर्स" मा थाले। यो क्लब को लिगमा बलियो टोली होइन। युवा प्रतिभा एक नेता विशेषज्ञहरु को ध्यान आकर्षित गर्न, यहाँ हुन चाहन्थे। यो वर्ष, सर्गेई लक्ष्य र सहायता को एक सभ्य नम्बर प्राप्त, आफ्नो क्षमता महसुस गर्न सक्षम थियो। यस कारण उनको टीम playoffs गए र लिग सफलतापूर्वक पहिलो राउन्ड बित्यो। म्याचको एक श्रृंखला मा 3: तर सम्मेलन को सेमिफाइनलहरू मा "सेतो टाइगर्स" बाटो ऊफा टोली "Tolpar"0को एक स्कोर संग दिनुभयो।
यो सिजन पछि, सर्गेई रुचि टोली र अग्रणी रूसी क्लब को एजेन्ट ब्रीडर्स। को युवा हक्की लिग Shumakov आफ्नो सर्वश्रेष्ठ सिजन क्लब लागि खर्च "साइबेरियन snipers।" मौसम समयमा, उहाँले 57 मिलान प्ले र 55 अंक गोल गरेका थिए।
को CHL मा Debut
को युथ लिगका यस्तो कुशल प्रदर्शन को लागि, सर्गेई साइबेरिया मा पहिलो टोलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। को KHL मा आफ्नो पहिलो outing को "Vanguard" विरुद्ध खेलमा फेब्रुअरी 17, 2012 आयोजित। तर, दुर्भाग्य उहाँलाई र प्रशंसकहरूको लागि, गृह बरफ डायल, उहाँले गर्न सकिएन उत्पादक अंक, साथै, प्रसंगवश, यो सिजन को पाठ्यक्रम मा। पहिलो लक्ष्य सर्गेई कजान "एके बार" विरुद्ध खेलमा सडक निम्न सिजन मा स्थान लियो। Shumakov Sergey - हकी निश्चित उपहार छ। तर उहाँले अनुभव हासिल गर्न आवश्यक KHL भाग लिन। तसर्थ, जवान हकी खेलाडी को कोच को निर्णय को खेत क्लब "एच ट्रांस-यूराल" को लागि खेल्न पठाइएको थियो। यसलाई6मिलान बिताएको लागि Shumakov एक सभ्य खेल देखाए। प्रभावकारी उहाँलाई लागि "नौसेना Karelia" विरुद्ध खेल्न प्राप्त। यो सभामा, तिनीहरूले दुई गोल र एक सहयोग दिए थियो। एक राम्रो सर्गेई खेल अक्टोबर 14, 2013 खर्च पछि साइबेरियन क्लब व्यवस्थापन यसलाई फिर्ता टोलीलाई ल्याउन निर्णय गरे।
Sergey Shumakov आफ्नो खेल उहाँले रूस लागि खेल्न योग्य छ कि साबित भयो। पहिलो Sergey को युवा टोली लागि खेल को एक ठूलो संख्या सञ्चालन। साइबेरिया सफल मौसम पछि, सर्गेई कोर टीम मा आकर्षित गर्न थाले। यो जवान खेलाडी जस्तै Karjala प्रतियोगिता रूपमा विभिन्न प्रतियोगिताहरु, आमन्त्रित। यो जवान खेलाडीहरू एक अद्वितीय दृश्य छ। मात्र यो प्रतियोगिताको आफूलाई योग्य साबित गर्नेहरूलाई, अधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरू मा प्रदर्शन गर्न टोली प्राप्त। प्लेयर को विकास दिइएको, भविष्यमा यो टोलीले नेताहरू एक हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
खेलाडीहरूलाई व्यस्त मानिसहरू हुन्। कुनै अपवाद र Sergey Shumakov, व्यक्तिगत जीवन धेरै प्रशंसक excites जो। यो जवान हकी खेलाडी जाँदा सधैं छ, वा घरेलू खेल को आधारमा तयार पारे। अहिलेसम्म उहाँले गाँठ बाँध थिएन। तर यो खेलाडी मात्र होइन साइबेरिया मा प्रशंसक, बीच धेरै लोकप्रिय छ, तर रूस सारा किनभने, लामो पछिल्लो छैन। सर्गेई Shumakov जसको फोटो तिनीहरूलाई प्रत्येक उपलब्ध छ, पछि, धेरै प्रभावशाली मान्छे हो।
आफ्नो भारी तरिका बावजुद सर्गेई उहाँले एक प्रतिभाशाली खेलाडी हो भनेर सबै साबित भयो। यसलाई निकट भविष्यमा Sergey अग्रणी रूसी र NHL टोली एक जानेछ सम्भव छ। आखिर, तिनीहरू सक्रिय त्यहाँ धेरै रुचि छन्।
Alexei Tereshchenko उपलब्धिहरू र जीवनी sporting
व्लादिमीर Jurzinov - हाम्रो हकी गर्व
एक बर्षको केटाकेटीको लागि उत्सव केक: नुस्खा
Exogenous - को endogenous चर असर कि चर छन्। macroeconomic मोडेल
घरमा sandalwood तेल को आवेदन
को निलम्बित छत स्थापना गर्न चाहे? र बेफाइदा
अरुणग्रह को वातावरण: संरचना। अरुणग्रह को माहौल कस्तो छ?
आंतों संबंधी बृहदांत्रशोथ। यसको विकास निर्धारण गर्ने लक्षण
ग्रहण - सबै भन्दा ठूलो नौका Abramovich